ISIQITHI SASECARIBBEAN OMNIKAZI - I-Airbnb
ISIQITHI SASECARIBBEAN OMNIKAZI
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguJuan
Indlu ebukekayo e-Isla Grande, e-Islas del Rosario National Park, inamagumbi ama-3 onke ajonge ulwandle, ulwandle lwabucala, i-pier, iibhedi zelanga kunye neebhedi zaselwandle. Yonwabela umtsalane kunye nokuzola kokuhlala kwiCaribbean yaseColombia.
Indlu yaselwandle yenzelwe ukuphumla, eneendawo ezigcwele indalo kunye neendawo ezibanzi zamaqela abahlobo kunye neentsapho.
Yindawo ekhethekileyo ngaphakathi kwe-Islas del Rosario yelizwe kunye nepaki ye-coral imizuzu engama-40 ngesikhephe esisuka kwisixeko saseCartagena, sijikelezwe lulwandle olunamanzi acwengileyo acwebileyo kunye neelwandle zesanti ezimhlophe, yindawo ezolileyo egcwele inkcubeko kunye nemisebenzi ye-adventure ukuze uyonwabele.
Sifumaneka ngamaxesha onke ukujongana neenkxalabo kunye nemibuzo onayo kunye nokuxhasa iimfuno ezinokuvela ngexesha lokuhlala kwakho ukuze ukwazi ukuphila amava angcono kwisiqithi kunye neendawo ezisingqongileyo.
Inombolo yomthetho: 97841